Halkuu marayaa xaalka magaalada Jig-Jiga? Halkan Riix. – Ahmed A. Abdulahi
Halkuu marayaa xaalka magaalada Jig-Jiga? Halkan Riix.
AhmedAbdiAbdulahi	Uncategorized	 August 9, 2018 1 Minute
Ahmed Abdi abdulahi
8- 9- 2018 20:02
Waxaa 6 dii cisho eelasoodhaafay magaalada jig-jiga Iyo guud ahaanba deeganka soomaalida itoobiya Hadheeyay cabsi kadib Qabsashadii militari ee ciidanka federal ka itoobiya kulawareegeen gacankuhaynta amaanka deegaanka.
Waxaa maalmihii udambeeyay la arkaayay dadbadan oo Guryohooda kaqaxaayay cabsi ayqabaan awgeed. Hadaba iyada oo maanta aytahay maalintii Lixaad ee militarigu wali haysto, waxaa wali jira saansaan degenaansho la,aan taasoo dadbadani ay wali walaac kaqabaan mustaqbalkooda. Xaalada ayaa umuuqatay mid dagan labadii maalmood ee udambaysay iyada oo dhaqdhaqaaqa ganacsi Iyo kan Dadkuba uu ahaa mid furfuran.
ilaahada majirinaan Baaq kasooyeedhay Dowlada federal ka Itoobiya taasoo umuuqata in wali aan xal lagagaadhin dib usoocelinta xasiloonida deegaanka. Hadaba waxaa jira warar la,iskuhalaynkaro kuwaasoo sheegaya in Gudiga fulinta deegaanku ay sogaadheen magaalada Adis-Ababa Si,ay ugaqaybgalaan Dhismo dowladeed oo loodhanyahahay si loosooceliyo xasiloonidii iyo iskusocodkii dadka deegaanka soomalida.
Previous Post Dadka Qaarkaqaxaya Jig-Jiga. 8- 7- 2018
Next Post Xaalada isbadal ee DDS